Tatoazy foko amin'ny sandry | Ny fanaovana tatoazy
Susana godoy | | Tattoos on, Tatoazy amin'ny sandry
Misy ireo izay mihevitra fa ny tombokavatsa misy foko dia tatoazy tsy misy lamaody, fa tsy misy zavatra lavitra amin'ny fahamarinana. Ny tribonaly dia mbola tia olona maro ary ny lamaody dia tena mifandraika satria ny famolavolana tatoazy sasany izay mety tsy hatsaran'ny olona sasany, ho an'ny sasany kosa. Izy ireo dia mety mbola ho endrika mahasarika indrindra hanaovana tatoazy amin'ny vatana.
Ny tombokavatsa foko eo amin'ny sandry dia karazana tatoazy izay matetika entin'ny lehilahy, fa ny vehivavy koa afaka mitondra azy raha tiany. Amin'ny resaka tsiro dia tsy misy na inona na inona voasoratra ary ny zava-dehibe dia ny fahatsapan'ny olona mahazo tatoa foko amin'ny sandriny fa mahazo aina amin'ny tatoazy izy.
Ireo foko dia mety ho tena tsara tarehy sy kanto ihany koa raha vita amin'ny tsipika tsara. Ny tatoazy foko dia manana tantara maro ary olona maro no nanana an'io karazana tatoazy io nandritra ny taonjato maro. Izany angamba no antony, amin'izao fotoana izao, dia mbola takian'olona mafy izy ireo, na lahy na vavy, amin'ny kolontsaina na faritra eto amin'izao tontolo izao.
Betsaka ny fomba azonao jerena ary hiankina amin'ny tsironao izany raha misafidy iray na iray ianao. Raha tianao ny endriny dia azonao atao ny mampifanaraka azy amin'ny vatanao mba hifanaraka tsara. Ny tatoazy foko amin'ny sandry dia safidy mety ary afaka misafidy ny faritra amin'ny sandry tianao indrindra ianao. Misy mihitsy aza ireo manao tombokavatsa amin'ny foko amin'ny fehin-tànana ka mifanentana tsara amin'ny sandry. Safidio ny endrika izay tianao indrindra ary avy eo, mifidiana mpanaingo tatoazy tianao ary fantatrao fa mifanaraka amin'ny zavatra tianao ny fombany. Tatoazin'ny foko eo amin'ny sandry, raha tianao ny foko sy ny niandohany, dia ho tatoazy tena mahomby.
1 Karazana tombokavatsa foko ho an'ny sandry
1.1 Dragona foko
1.2 Liona foko
1.3 Rojo foko
1.4 Foko Maya
Karazana tombokavatsa foko ho an'ny sandry
Fantatsika tsara, raha misy iray amin'ireo zavaboary ampahany amin'ny nofinofy sy angano, dragona ireo. Hitanay tamin'ny lafiny maro izy ireo, indrindra teo amin'ny efijery kely na lehibe. Fa ankehitriny dia mamakivaky ny hoditsika amin'ny endrika tombokavatsa dragona foko izy ireo. Misy heviny maro omena azy ireo, satria miankina amin'ny kolontsaina izy io.
Ho an'ny sasany dia nitovizany tamin'ny mpamorona na mpiaro izany, fa ho an'ny sasany kosa dia akaiky kokoa ny fahafatesana ny fifandraisan'izy ireo. Mazava ho azy rehefa miresaka momba ny tatoazy dragona foko, azontsika atao ny manamboatra azy amin'ny konotations izay tiantsika indrindra ary koa amin'ny habe izay tadiavintsika, miankina amin'ny ampahan'ny vatana handraisantsika azy. Ny safidy dia maro sy isan-karazany. Saingy izy rehetra dia mijanona miaraka amin'ny tandindon'ny fifehezana hatrany.
Ahoana no hahakely azy io, ny liona dia iray amin'ireo biby matanjaka indrindra. Nosokajin'izy ireo ho mpanjaka any an'ala izy ireo. Matetika izy io dia mifandray amin'ny tanjaka na herim-po ary koa hery. ny tatoazy liona foko izy ireo koa dia manao fampisehoana ireo toetra rehetra ireo izay mifandray amin'ny tontolo ara-panahy kokoa. Noho izany dia tsy maintsy ataontsika ao an-tsaina foana ny andalana sy ny endrika izay hanondro biby toy izao. Ny safidinao na ny vatana manontolo ihany no azonao atao raha te hanana hatsarana bebe kokoa amin'ny hoditrao.
Io no iray amin'ireo safidy be mpijery indrindra rehefa miresaka tatoazy foko. Ny rojo dia afaka mandravaka ny faritra samihafa amin'ny vatana fa amin'izy rehetra, ny sandry no tiany. Ny lalana sasany dia misampona ary indraindray dia toa tsilo aza, noho izany dia hiovaova hatrany ny hevitr'izy ireo. Marina fa amin'ny ankapobeny, ny gadra dia mitovy dika amin'ny famoretana iray. Fa koa azontsika omena azy ny dikany izay mifanaraka indrindra amin'ny tsirairay. Satria ny foko dia tsy manana ireo famaranana ireo mikatona toy ny rojom-bolo fototra. Noho io antony io dia ny fahalalahana sy ny finoana no manafika azy.
Nanao tatoazy marobe ny Maya ary samy nanana ny dikany vaovao ny tsirairay tamin'izy ireo. Ny marika dia nijanona nandritra ny taona maro ary izany no antony hitazomana ny fomban-drazana hatramin'izao. Ny fiarovana sy ny finoana ara-panahy no tena dikan'ny tatoazy. Biby na tany na masoandro koa dia niseho teo afovoan'izy ireo. Ny fanambinana sy ny fanovana dia tandindona ihany koa avy amin'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Tatoazy foko amin'ny sandriny
Juan Challco Lenes dia hoy izy:
Mahaliana ny tataujes rehetra
Valiny tamin'i Juan Challco Lenes
Tatoazy tsara ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy: fanontaniana momba ny lahy sy ny vavy?